Booqdaha Hawaii oo kubixinaya US $ 1.44 Billion Laakiin Kahooseeya Faafida Hore
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Booqdaha Hawaii oo kubixinaya US $ 1.44 Billion Laakiin Kahooseeya Faafida Hore
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Hawaii: Kharashka booqdayaasha wuxuu ku kordhay $ 1.46 bishii Febraayo 2020
Dalxiisayaasha ayaa soo gaarayay Hawaii meel u dhow heerarka ka hor-faafidda-qiyaastii 26,000 oo rakaab ah ayaa imanaya maalin kasta. Laakiin tirakoobyadu waxay muujinayaan inay aad uga taxaddaraan lacagtooda kharashaadka.
Wadarta booqashada Hawaii ee dalxiisayaasha imanaya Juun 2021 waxay ahayd US $ 1.44 bilyan. Taasi waxay wali ka hooseysaa Juun 2019 markii qarashka booqdaha uu ahaa US $ 163 bilyan - hoos u dhac 11.9 boqolkiiba.
Lambarro looma helin kharashaadka booqdaha bisha Juun 2020.
Tirakoobyadan hordhaca ah waxaa si wadajir ah u soo saaray Waaxda Ganacsiga, Horumarinta Dhaqaalaha iyo Dalxiiska (DBEDT) iyo Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii.
6 -dii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2021, wadarta kharashka booqdaha wuxuu ahaa US $ 4.86 bilyan. Marka la barbardhigo, tani waxay ka dhigan tahay 45.1 boqolkiiba hoos u dhac ku yimid US $ 8.86 bilyan oo la isticmaalay qeybtii hore ee 2019.
Wadarta 791,053 booqde ayaa ku yimid adeeg hawada hawada Jasiiradaha Hawaii bishii Juun 2021, gaar ahaan Galbeedka Mareykanka iyo Bariga Mareykanka. Ka hor caalamka Faafida COVID-19 iyo HawaiiShuruudaha karantiilnimada ee socotada, Jaziiradaha Hawaii waxay la kulmeen kharashyada booqdayaasha iyo imaatinka heerka rikoodhka ah ee 2019 iyo labada bilood ee ugu horreeya 2020. Marka la barbar dhigo 2019, booqdeyaasha yimid Juun 2021 ayaa hoos uga dhacay 16.5 boqolkiiba tiradii Juun 2019 ee 947,112 booqdayaasha (hawada iyo dalxiiska). Marka la barbardhigo, kaliya 17,068 booqde ayaa ku yimid diyaarad bishii Juun 2020.
Wadar ahaan 2,751,849 booqdayaal ayaa yimid qeybtii hore ee 2021, oo ah 27.6 boqolkiiba marka la barbardhigo qeybtii hore ee 2020. Wadarta imaanshaha ayaa 46.8 boqolkiiba ka hooseysay 5,171,182 booqdayaasha qeybtii hore ee 2019.
Intii lagu jiray Juun 2021, inta badan rakaabka ka imanaya gobolka-ka-baxsan iyo kuwa u safraya gobollada waxay dhaafi karaan 10-ka maalmood ee is-karantiilka ah ee Gobolka oo leh natiijo tijaabo ah oo COVID-19 NAAT ah oo ka timid Wada-shaqeeyaha Tijaabinta La-aaminay ka hor intaanay tegin Hawaii. iyada oo loo marayo barnaamijka Safarada Nabdoon. Intaa waxaa dheer, shaqsiyaadka sida buuxda loogu tallaaley Hawaii waxay dhaafi karaan amarka karantiilnimada laga bilaabo Juun 15, 2021. Xayiraadaha socdaalka ee gobollada ayaa sidoo kale la qaaday Juun 15, 2021. Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Mareykanka (CDC) waxay xoojiyeen xayiraadaha maraakiibta dalxiiska ee maraya “Amarka Shiraaca Shuruudaysan”.